Raira mutsara zvirongwa zvese zvinhu muLinux | Linux Vakapindwa muropa
Chinyorwa ichi ndeche ma geek eimba, ehe, ndinoziva kuti kushandisa koni kunoshamisira mune dzino nguva neCompiz Fusion, ine KDE4 nezvimwe zvinhu zvisina musoro, asi kune vanhu vachiri vachiri kwechinguva kana vanogara vachida zvirongwa zvinoshandisa chinyorwa-chete chinongedzo. Ini ndinoda kushandisa zvirongwa zveconsole, ndinoda minimalism, saka tichaongorora zvirongwa zvinonyanya kukosha kuita hupenyu hwedu hwezuva nezuva paLinux.
Kana iwe uchinge wapererwa neyakajeka nharaunda ita shuwa kuti iwe unenge uine aya mapurogiramu ekuchengetedza.
Kune akawanda asi ini ndiri kuenda kuzoongorora inonyanya kubatsira pane yega yega chiitiko kubva kwandinoona:
Faira Navigator: Pakati peusiku mutungamiri (MC). Taifanira kuzvitumidza. Tiri kutaura nezve (kana usati uchizviziva) yakakosha faira bhurawuza kana iwe uchida kuongorora mafaera ako uye usina chimwe chinhu uye kuita "cd" kumusoro uye "cd" pasi kuri kuzokusvota munguva pfupi inotevera. Inozivikanwa asi sezvo isinga gadzikiswe nguva dzose seyakajairwa, ini ndichaitsanangura uye haufanire kuzvarwa uchiziva. Icho chidziro chakakamurwa nepakati, zvakafanana neizvi kugona kuendesa mafaera zviri nyore uye iwe unoenda kubva kune imwe skrini uchienda kune imwe ne [TAB] Kumusoro kune menyu yakakwana.
enamel: Mutt. Ini ndinoikurudzira mune ino runyorwa kwete nekuti iri nyore, kusiyana neEELinks haina kujeka kunyangwe isiri yakaoma, asi, semuenzaniso, kugadzirisa email tinofanirwa kugadzira faira rekunze kunze. Heano a chidzidzo chekubatanidza Gmail kuna Mutt. Ini ndinoisanganisira nekuti ndiyo inozivikanwa uye ndiyo ine mukana wakanyanya wekuwanikwa mukutsvaga kwekudzidzisa.
Kukurumidza kutumira: Pano isu tinomanikidzwa kuratidza akati wandei sarudzo, kana iwe uchida kushandisa iyo terminal nekuti iwe waisaziva maitiro ekumisikidza graphic server iwe uchazonyatsoda rubatsiro, saka mutumwa anobatsira, asi kwete tese tinoshandisa zvakafanana network .
Finch: iri multiplatform messenger iyo inoedza kuve nemifananidzo yakajeka sezvinobvira ichikubvumidza iwe kuti utaure nevanhu vanoverengeka panguva imwe chete uye nemisanganiswa yakakosha yekubva pane imwe hurukuro kuenda kune imwe. Iyo inoshanda nemaraibhurari ane hukama nePidgin (muchokwadi iri kubva kune vakafanana vadziki) saka zvinogona kutora iyo data kubva kuPidgin uye ndokuserere iwe dambudziko rekugadzira account.
Kunyanya kutaurwa kwe kutaura pachena, iyo console gTalk. Handisati ndamboona nhume pakarepo iri nyore kushandisa, kunyangwe mune yakajeka nzvimbo. Ingobvunza, zita rekushandisa uye password, inotangisa shamwari dzako runyorwa uye inyaya yekuisa iyo Jabber account kumberi kweshoko (haishande nemahwindo asi nemirairo). Chokwadi (sezvandaizotaura) zvinoshamisa.
mumhanzi: MOC inomirira Music On Console (mocp). Icho chiri nyore kwazvo mutambi ine yayo yefaera browser paunongofanira kuisa dhairekitori uye pinda ENTER kuti utambe iyo uye mamwe ma mp3s. Izvo zvinokuyeuchidza iwe wepakati peusiku mutungamiriri weiyo yakatsemurwa skrini, ino nguva ndeyekuti kurudyi iwe ugadzire yako yekutamba playlist
Wedu mudiwa Laura atoongorora vatambi vakati wandei uye vamwe vakataura izvozvo mp3blaster pakunyaradza yaive yakanakisa. Handina kuzviedza, saka ndinozvisiira kwamuri.
Video: Ivo vanogona kushandisa mplayer iyo kunyange inobereka muascii ruvara
Twitter mutengi. Kunonoka. Ndinoziva akawanda anoshandisa ttytter asi ndinofanira kukuudza nezve zvandakaedza uye iyo yandinowanzo shandisa kana ndichida kushandisa koni ndeyeMitter. Mitter ndeye graphical mutengi iyo isingamire zvakanyanya, zvisinei, ine iyo console vhezheni nekutaipa «
»Uye zviri nyore kwazvo kushandisa, kuvhura iyo« nguva yenguva »nekutsikirira ENTER pane isina chinhu mutsetse.
Kune mamwe akatiwandei mamwe mapurogiramu, mamwe anoshandiswa pane mamwe. Ese ayo ataurwa pano ari munzvimbo dzekuchengetera, zvirinani muDebian, kunze kwemitara.
Vanoshandisa here kana kuti vakamboshandisa ivo?
Kana paine chirongwa chaunofunga kushaikwa muchikamu chitsva, tinochiwedzera kune icho chinyorwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Raira mutsara zvirongwa zvese zvinhu muLinux
Oo, ndanga ndichironga kukurukura iyi nyaya.
Heino runyorwa rwangu:
Mafaira: Ini pachangu, ini ndinoda 'cd, rm, mv, cp', asi nguva pfupi yadarika ndinoona kuti Vim iri chaizvo, VERY yakanaka faira browser, kana iwe usina zvido zvakaoma kudaro.
Email: Hapana zano, ini handisati ndamboshandisa.
IM: CenterIM yakanyatsozadziswa yakawanda protocolocol mutengi. Yakaberekwa pakafa CenterIQ.
Mimhanzi: MPD ine ncmpcpp. Zvakanakira MPD zvakawanda, asi ndine usimbe kuzviisa. XD
Vhidhiyo: MPlayer. Usataure zvakawanda.
Twitter: Ini ndiri mumwe weava bugs vanoshandisa TTYtter. Kana iwe uine mukana wozviedza, zvakanaka kune vateveri vehardcore twitter senge iwe xD
Bhurawuza: Ini ndangoyedza maLinks-g. Ndakaedza kushandisa w3m asi handina kuwana nguva yekuidzidza, zvinoita kunge zvakakwana.
Window Maneja: Sep. Screen ingangodaro iri yakanyanya kushandiswa uye yakakwana sarudzo. Kune yakakura 'noobosity', isu tine mapatya, ayo anoteedzera emahwindo mu cosola.
RSS: Snownews. Zvakareruka uye zvine simba.
Uye ... ini ndanga ndatokanganwa vamwe. x
Kunyangwe ini ndichishandisa koni nguva dzose, iko chete kunyorera kwandinoshandisa mutt kutumira mamwe maemail kumaseva asina X neimwe nzira, yema multimedia misoro uye nevamwe ini ndinofarira interface kunyangwe iri nyore uye yakapusa. Shuwiro yakanakisa.
amash @ Basa akadaro
Mupiro wangu, kunyangwe pamwe ndakagara munguva
irssi: D wandinoda IRC mutengi, uye DCC futi.
Pindura ku amash @ Kushanda
Ini ndaiziva Lynx pakati pemabhurawuza
Imwe chete yandinoshandisa zvakanyanya pachinyorwa ndeye mocp. Zvakanaka. Iyo MC yaizviziva, asi haina kumboishandisa. Ini zvakare ndinofungidzira kuti panofanirwa kuve nemazana mamwe ekupedzisira. Pasina nguva refu yadarika ndakasangana nerondedzero ine zvinhu zvakati wandei zvakadoma zvimwe zvirongwa zvakawanda zvinoshanda gumi mutemu. Inonakidza kwazvo posvo. Rombo
Kutaura nezvekunyaradza, kune distro yakavakirwa pairi zvachose; Ndakaiyedza zvishoma uye zvakanaka kudzidza kushandisa rairo yekuraira (kunyangwe iri muChirungu chete)
Ini handisi munhu anofarira kushandisa zvinhu paconsole, ndinozviita kana ndisina imwe xD
Ini ndinoda kutora mukana wekumhanya, simba uye kuchinjika kweiyo koni kana isingakanganise kubva pakushandisa: kana kuoma kwekushandisa kuri kukuru, kunogona kukanganisa zvakanakira.
Saka ini ndinoshandisa maLinks mazuva ese (ini ndinowanzo tsvaga zvinyorwa, kwete mifananidzo kana mavhidhiyo); nguva nenguva ndinoshandisa Midnight Commander, izvo zvinounza ndangariro dzaMutungamiriri Norton.
Tsamba: Alpine. Zviri nyore kugadzirisa uye kushandisa kupfuura Mutt.
RSS: NewsBeuter. Ini ndichangozvitsvaga uye zvinoita kunge zvisinganzwisisike kwandiri: nekukurumidza, nyore, simba; Zvikuru zvekuti ndinofunga ndinosiya Akregator neLiferea.
Kutenda neruzivo, chinhu chemuturu chakandibatsira, kwaziso!
Pindura kune gory
Zvinotaridza senge ngano kwandiri kugadzira runyorwa rwekushandisa kweconsole. Zvinonzwika kwandiri (kunyange ndisina kumboishandisa) kuti pane vhezheni yechinyaradzo.
Pane chero munhu anoziva kana paine chero linux distro inonyatso isa iyo console mode system (isina X-Windows) uye neayo maapplication?
Huye, debian-shoma, wobva waisa izvo zvaunoda, pane zviuru, haungo gadza graphite nharaunda uye ikozvino
Zvinogara zvakanaka kuti uve nezvinhu izvi zvekunyaradza paruoko ...
Parizvino ndiri kuunganidza zviwanikwa kuti ndikwanise kudarika proxy yekambani yangu uye kubuda kuburikidza nechiteshi chisina kudzora. Mushure mekubatanidza ssh kuburikidza ne putty uye sshserver kumba kwangu pc, ini ndinobatana uye kubva ipapo mune mameseji modhi ndine rusununguko rwekutarisa uye kuita chero chandinoda.
w3m kutarisa webhu
mutt kune tsamba
newsbeuter ye rss
uye ini ndiri kuyedza kutanga mapatya, hwindo maneja mhando xserver asi mukati mechiteshi.
post yakanaka !!
Shoko Grinder. Iri nyore kwazvo asi rakanaka kwazvo izwi processor. Ndiri kutsvaga dzimwe nzira dzerudzi urwu rwechirongwa, kana iwe uchiziva chimwe chinhu, ndatenda nekuti chakagara muBeta kubvira 1999 pamwe neshanduro 0.3.3
Jaime Reus akadaro
Chingave chinonakidza ndechekuti paive neanogadzira mazwi pasina mamiriro akajeka
Pindura Jaime Reus
Kufamba neBill Gate kuburikidza neMicrosoft